Mandràra ny olom-pirenena rehetra mbola tsy vita tondrozotra amin'ny fitsangatsanganana any ivelany i Koety
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Koety » Mandràra ny olom-pirenena rehetra mbola tsy vita tondrozotra amin'ny fitsangatsanganana any ivelany i Koety
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Koety • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Kuwait mandràra ny olom-pirenena tsy voamarina rehetra amin'ny dia any ivelany
Ny fandraràna lamba firakotra amin'ny fitsangatsanganana any ivelany ho an'ny olom-pirenena Koesiana rehetra tsy nasiana volo dia nambaran'ny manampahefana androany.
Ny teratany Koesiana vita vaksiny ihany no navela handeha any ivelany.
Manomboka amin'ny 1 Aogositra ny fandraràna ny dia.
Ny zaza latsaky ny 16 taona dia afaka amin'ny lalàna vaovao.
Nanambara ny manampahefana Koesiana fa ny teratany Koesiana vita vaksiny ihany no avela hivezivezy any ivelany, ary hampiorina tsara ny ampahany betsaka amin'ny mponina 4.2 tapitrisa ao amin'ny firenena.
Ny fandraràna lamba firakotra momba ny fitsangatsanganana vahiny ho an'ireo olom-pirenena tsy voamarina dia nambaran'ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena Golfa androany. Manomboka amin'ny 1 Aogositra dia olona vita vaksiny ihany no avela handeha lavitra.
Na izany aza, ireo zaza latsaky ny 16 taona, olona voan'ny aretina manakana ny fanaovana vaksiny, ary ny vehivavy bevohoka dia tsy ho voahaja amin'ny lalàna vaovao ary avela handeha raha mahazo fanamarinana mety avy amin'ny minisiteran'ny fahasalamana ao amin'ny firenena.
Ny hetsika dia mandaitra ny velaran-tanànan'ny Koetiana ambanin'ny fandraràna ny fivezivezena avy any ivelany. Araka ny angona farany azo, Koety dia nitantana vaksinin'ny COVID-2.3 maherin'ny 19 tapitrisa, miaraka amin'ny olona iray tapitrisa hatreto - maherin'ny 22% ny mponina - no voatifitra indroa.
Na dia tsy mazava tsara aza ny fanambarana momba ity raharaha ity, dia toa midika izany fa ny olona vita vaksiny feno ihany no avela handeha aorian'ny fampiharana azy io amin'ny volana ambony.
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana dia nanoratra tranga 394,000 COVID-19 i Koety, efa ho 2,300 ny olona maty tamin'io aretina io.